Cayaaryahanka Didier Drogba - BBC Somali
Cayaaryahanka Didier Drogba
16 Nofembar 2010
Maalintii furitaanka xilli ciyaareedka 2009/2010, waxaa Chelsea ku dhacayay wax aan la malaysan karin. Waxaa ka badinaysay kooxda kubadda cagta ee Hull City, taasi dabcan waxay ahayd intii uusan soo gelin Didier Drogba oo labo gool u dhaliyay Chelsea kana badbaadiyay in laga badiyo.
Taasi waxay ahayd calaamad arrimo ka soo socda xagga weeraryahanka reer Ivory Coast ee 32 jirka ah.
Tan iyo bishii Jannaayo 2010, Drogba waxaa uu sii waday inuu goolal u dhaliyo naadi iyo waddanba. Waxaa uu kooxdiisa Chelsea u dhaliyay 37 gool isagoo u saftay 40 ciyaarood, waxaana uu kooxdaas reer London gacan ka siiyay inay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay wada qaaddo horyaalka iyo koobka FA ee dalkan Ingiriiska, isla markaana uu noqday laacibka ugu goolasha badan tartankii horyaalkaas.
Isagoo kabtan u ah xulka dalka Ivory Coast koobkii Qaramada Afrika iyo koobkii adduunka ee sanadka 2010, Drogba waxaa uu ahaa ciyaartoyga ka dhex muuqda kooxda maroodiyaasha oo wax badan ballan qaadday hase ahaatee wax yar qabatay.
Waxaa cajiib ah, Drogba waxaa laga soo xigtay inuu sheegay inuusan ku waalneyn gool dhalinta tan iyo markii uu xilliga cusub bilawday-na, waxaa uu ahaa mid aad kubbadda u dhiiba halkii uu isagu ka dhalin lahaa iyadoo goolasha uu dhigay ay dhaliyeen ciyaartoy ay ka mid yihiin Salomon Kalou, Florent Malouda iyo laacibka ay weerarka wada yihiin ee Nicholas Anelka oo mid waliba uu dimbiil ka buuxsaday goolasha Drogba u dhigay.
Drogba waxaa uu ka mid yahay gool dhaliyeyaasha maanta adduunka ugu khatarsan. Jacaylka uu ciyaarta u qabo waxay mararka qaarkood ka keentaa xanaaq kulul, laakiin shaki badan kuma jiro inuu Drogba yahay shakhsi muuqda mar kasta oo garoonka uu ku jiro.
Waan u codayn lahaa Didier Drogba sababtoo ah waxaa joogto u ah in uu dhaliyo goolasha muhiimka – Goolal lahaa muhiimad aad ugu wayn naadiga iyo dalkiisaba.
Wuxuu xilliyadii ugu dambeeyay muujiyay in uusan oo kaliya goolal dhalinin, balse in xitaa uu u abuuro goolal saaxiibadiisa ay wada cayaaraan heer aad usii kordhaya.
Waraysi Nicolas Anelka, Solomon Kalou iyo Florent Malouda, sababta gool dhalinta aadka ugu fududaato mar kasta oo uu ka dhinac cayaarayo weeraryahankan.
Ma jiro cayaaryahan kale oo qaaradda ah oo sanad u wanaagsan sida kan soo maraya cayaaryahanka Ivory Coast oo xilligu ugu bilowday si heer sare ah kuna dhamaynaysanaya si waliba ka sii saraysa.
Natiijada uu curiyay ee ah in 40 cayaarood oo uu ka qaybgalay uu dhaliyay 37 gool oo kooxda reer London, ayaa laba jibaar u dhiganta intii uu u dhaliyay cayaarihii sanadkii hore, waxaana uu noqonayaa gool dhaliyaha ugu sareeya tartanka English Premiership.
Tartankii Qaramada Qaaradda Africa ee ka dhacayay Angola, kooxdii matalaysa Ivory Coast aad ugama soo muuqan balse Drogba waa ka dhex muuqday ololihii dhibka lahaa ee kooxdiisa loo yaqaan maroodiyada ay u soo galeen. Waxay markii dambe Ivory Coast ku hartay wareegga sideedda koox isugu soo haraan.
Heerka ugu sareeya ee cayaaraha dunida, tartankii FIFA world Cup 2010 ee Koonfur Africa ka dhacay kaalintii uu isku muujin lahaa waxay shaki gashay markii uu qaliin galay kadib gacan ka jabtay 5-dii June.
Niyadda adaygiisa waa laga dareemi karay cayaaraha intii ay socdeen iyadoo uu kooxda uu dardargaliyay sadexdii kulan ee qaybta group-yada cayaarihii ka dhacayay Koonfur Africa.
Ivory Coast, waxay ku jirtay Group aad u adag, balse Drogba wuxuu ka tagay xusuus markii uu gool madax ah oo aad u sareeya uu ka dhaliyay kooxda Brazil oo 3-1 uga adkaatay.
Jeclow ama necboow, farqi wayn ayaa u dhaxeeya weeraryahan iyo gooldhaliye, waxaanan anigu rabi lahaa kan dambe in uu ku jira kooxdayda intii uu qofku iska ahaan lahaa mid magac uun sita.
Qof indha la’ uun, ayaa Didier Drogba markii labaad oo xiriir ah u diidi kara in uu noqdo cayaaryahanka sanadka ee Africa ee BBC.
Qodob kale oo Faaqidaad ah